नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वर्तमान सरकार अरुले भन्ने गरेजस्तो परमादेशबाट नभएर जनमतबाट निर्मित सरकार हो, जनताले चाहेको सरकार भएकाले जनअपेक्षाबमोजिम नै काम गर्नेछ बताउनुभएको छ । ज्येष्ठ कांग्रेस सङ्घद्वारा काठमाडौंमा आयोजित स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले अघिल्लो कम्युनिष्ट सरकारले बाटो नबिराएरको भए, चुनावका बेलामा जनतासँग गरेका वाचाअनुसार काम गरेको भए तथा देशमा सुशासन …
आफ्नो सरकार जोगाउन नसक्नेले अर्काको सरकार ढलाउने धम्की नदिए हुन्छ : मन्त्री खाँण
प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफ्नो सरकार टिकाउन नसक्नेले अर्काको सरकार ढलाउने धम्की नदिन चेतावनी दिएका छन् । पाँचथरको तुम्बेवा–५ मौवामा स्थानीयवासीसँगको अन्तक्र्रियाका क्रममा उनले आफ्नै सरकार र पार्टी जोगाउन नसक्नेले फेरि सरकार ढलाउने धम्की नदिन चेतावनी दिएका हुन् । विपक्षी दलका नेताहरुले अहिलेको सरकारलाई सजिलै ढलाउन सक्ने दाबी गरेको केही दिनपछि गृहमन्त्री खाँणले अहिलेको सरकार कसैले ढलाएर नढल्ने तर्क गरेका हुन् । &ld
यो सरकार ‘कठैबरा सरकार’: ओली
झापा – नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई ‘कठैबरा सरकार’को संज्ञा दिएका छन्। सरकार गठन भएको यतिका महिना वित्दा पनि केही गर्न नसकेको भन्दै उनले कठैबरा सरकारको संज्ञा दिएका हुन्। उनले भने, ‘यो सरकारको के कुरा गर्नु! कठैबरा सरकार।’ झापाको विर्तामोडमा आइतबार आयोजित बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई बोल्दै उनले सरकार […]
सरकार र संसदको असक्षमताका कारण सरकार बजेटविहीन : अर्थविद्
काठमाडौं, भदौ ३० । अर्थविद्हरुले सरकार र संसदको असक्षमताका कारण सरकार बजेटविहीन बनेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले सरकार र संसदको असक्षमताका कारण सरकार बजेटबिहीन बनेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्राध्यापक चन्द्रमणि अधिकारीले सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र संसद अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नरहेको पुष्टि भएको बताउनुभयो । ४ किसिमले सामान्यतया बजेट खर्च […]
अहिलेको सरकार लङ्गुरहरुको सरकार हो : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार लङ्गुरहरुको सरकार भएको बताएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
एजेन्सी । अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिएको तालीवानीहरुले सरकार गठनको तयारी गरेका छन् । २० बर्षको लामो संघर्षपछी सत्ता कब्जा गरेको तालीवानीले आफुहरुले युद्ध जितेको घोषणा गर्दै सरकार गठनका तयारी थालेका हुन् । उनीहरुले अफगानिस्तानमा जारी तनाव अन्त्य गर्दै सरकार गठन गरी देश र जनताको भलाईका लागी काम गर्ने घोषणा गरेका छन् । अफगानिस्तान आफनो कब्जामा गएपछी […]
यसरी म सरकार चलाउन सक्दिन: प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार चलाउन दिक्क भइसकेको बताएका छन् । शुक्रवार सिँहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफूले थप सरकार चलाउन नसक्ने बताएका हुन् । सरकार चलाउन नचाहेकै कारण आफूले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नगएको बताए । विरोधै विरोधकाबीच आफूले सरकार चलाउन नसक्ने भन्दै वैकल्पिक सरकार लिएर आउन विपक्षी गठबन्धनलाई आग्रह गरे । घेराबन्दी […]
म सरकार हुँ!
मलाई यतिसम्म घमण्ड छ म अस्पतालमा बेड नभएको सिलिण्डरमा अक्सिजन नभएको विज्ञप्ति निकाल्दैछु मलाई घमण्ड छ म सरकार हुँ मलाई घमण्ड छ, म व्यापार हुँ।
वर्तमान सरकार कुनै पनि हिसाबले विश्वास नगर्नुपर्ने सरकार हुँदै होइन : प्रधानमन्त्री ओली
उखुको अवसान: सरकार! हामी यता छौँ